Sidee loogala soo baxaa erayga sirta ah ee Hotmail xeelad yar | War gadget
In kasta oo ay jiraan ballanqaadyo ballaadhan oo Microsoft ay ku timid inay ku dhejiso macmiilkeeda emailka, haddana weli waxaa jira xaalado gaar ah oo ay ku jiraan Qof ayaa khawan kara furaha Hotmail (ama Muuqaalka cusub ee Outlook.com), iyadoo sababtan loo leeyahay isku day inaad ku soo ceshato habka kaliya ee saxiixa ku bixiyo.
Siyaasadaha asturnaanta iyo amniga, Microsoft ma bixiso wado kale oo loo maro wadada caadiga ah markay tahay soo kabashada furaha erayga 'Hotmail', sidaa darteed waa inaan isku dayno inaan tixgelinno dhinacyo dhowr ah oo markii hore ay ahayd in la qaabeeyo markii aan marinno koontada emaylka. Hadda waxaan isku dayi doonaa inaan sheegno, waxa la sameynayo haddii sababo jira awgood aanan u geli karin adeegga.
1 Sida looga soo kabsado lambarka sirta ah ee Hotmail caawimaaddiisa farsamo
2 Adeegso emayl kale oo soo kabasho ah
3 Fariinta moobilka
4 Ikhtiyaar kale
Sida looga soo kabsado lambarka sirta ah ee Hotmail caawimaaddiisa farsamo
Waxaa jira kaliya hal talaabo oo ay tahay inaad qaado waqtigaan haddii lambarkaaga sirta ah ee 'Hotmail' wax laga beddelay oo sidaas darteed, ma geli kartid ama ma geli kartid adeegga. Waxaan kugula talineynaa inaad marka hore aado dhanka xiriirka soo socda, halkaasoo aad ka heli doontid 3da beddel ee kaliya ee ay Microsoft ku siiso markay tahay soo kabashada ama dib u dejinta lambarkaaga sirta ah ee Hotmail, kuwaas oo kala ah:
"Waxaan hilmaamay furaheyga sirta ah"
"Waan ogahay waxa furaheygu yahay, laakiin ma gali karo"
"Waxaan u maleynayaa in qof kale uu isticmaalayo koontadayda Microsoft"
Waa inaad doorataa mid ka mid ah 3-da ikhtiyaar ee shaashadda laga muujiyay iyo tan aan horay u soo jeedinnay.
Waxay kuxirantahay doorashada aad sameysay, si aad uhesho furaha Hotmail ee lumay, la iloobay ama la jabsaday, Microsoft way ku weydiin kartaa:
Lambarka taleefanka si aad isaga diiwaangeliso goobaha koontada.
Haddii aad ku guuleysatay inaad ku xirto mid ka mid ah macluumaadkan koontadaada Hotmail, markaa waad awoodi kartaa hel koodh, fariin SMS ah ama emayl dib u soo celin ah ee furaha Hotmail dhowr ilbiriqsi gudahood; Waxaa laga yaabaa in talo ahaan aan kuu soo jeedin karno inaad doorato ikhtiyaarka saddexaad haddii aad u maleyneyso inuu qof xaday lambarkaaga sirta ah ee Hotmail; Xulashadaan waxaad kaliya ku dooranaysaa «Kale» si aad u siisid sharraxaad yar ee waxa dhacaya; farriintan gudaheeda ha ilaawin inaad ku qorto cinwaan emayl kale inuu kula soo xiriiro. Haduu Microsoft gaaro ogow inay jiraan howlo yaab leh (adoo adeegsanaya cinwaanka IP-ga ee ku jira koontadaada), waxay isla markiiba kula soo xiriiri doontaa emaylka aad uga tagtay farriinta xulashadan ugu dambeysa.
Haddii aad lumisay marinka koontadaada 'Hotmail', waxaa jira fursado dhowr ah oo aad ku soo ceshan karto. Marka xaqiiqdii waxaa jira habab ku habboon waxa aad u baahan tahay waqtigaas, si aad marin ugu hesho koontada mar walba. Ikhtiyaarrada aan haysanno waa kuwa soo socda:
Adeegso emayl kale oo soo kabasho ah
Waxa caadiga ah marka la abuurayo koonto emayl waa inaan siino koonto email dheeri ah. Sidan oo kale, haddii ay wax dhacaan, waxaan lahaan doonnaa hab kale oo aan ku marinno. Xagga Hotmail / Muuqaalka, badiyaa waxay na weydiiyaan emayl soo-kabasho, kaas oo noqon kara koonto ku jirta Gmail ama meel kale oo email ah. Haddii aan ilownay lambarka sirta ah, waa inaan gujineynaa doorashadan shaashadda si aan u galno lambarka sirta ah.
Marka sidaas la sameeyo, waxaa naloo muujin doonaa shaashad aan ku dooran karno habka aan rabno inaan u isticmaalno dib u helidda marinka. Caadi ahaan badanaa waa in la isticmaalo emaylkan soo-kabashada. Waxa ay sameyn doonaan markaa Hotmail / Muuqaalka, waa u dir koodh cinwaanka emaylka la yidhi. Markaad hesho, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad gasho lambarkan waxaadna dib u heli doontaa marinka koontada. Sidoo kale, waxaa lagu weydiin doonaa inaad u sameysato eray sir ah oo cusub. Daqiiqado gudahood ayaan mar labaad marin ugu heli doonnaa.
Haddii ay dhacdo inaadan haysan akoon kale oo emayl ah, oo ah wax dhici kara xaalado badan, waxaan haynaa qaab kale oo laga heli karo Hotmail. Waxaan isticmaali karnaa SMS. Tani waxay la mid tahay kiiskii hore, kaliya markan lambarka amniga ee ay noo soo dirayaan waxaa loogu diraa taleefankeena gacanta SMS. Ma jiraan waxyaabo kale oo ku kala duwan arrintan.
Sidaa darteed, markaan tagno si aan u galno, waa inaan gujino ikhtiyaarka aan illaaway eraygayga sirta ah. Waxaa naloo diray shaashad xigta, taas oo caadiyan lagu taliyo in la isticmaalo emaylka soo-kabashada. Haddii aadan mid haysan, ama aad doorbideyso inaad adeegsato SMS, waa inaad gujisaa xulashada SMS-ka, illaa iyo intaad lambarka taleefanka kula xiriirisay koontada waagii hore. Kadib waa la ogol yahay in SMS loo diro taleefankaaga, taas oo ay tahay inaad gasho.
Kadib waxaad u baahan doontaa inaad gasho lambarkan Hotmail, si aad u bilowdo hawsha soo kabashada koontada. Markaad marin u hesho, waxa ugu horeeya ee badanaa la weydiiyo waa in la beddelo lambarka sirta ah. Marka si aynaan mar dambe u waayi doonin marinkaa aan u helnay.
Way dhici kartaa in labadan ikhtiyaar midkoodna aanu ku habboonayn kiiskaaga. Sidaa darteed, waxaad u baahan kartaa ikhtiyaar saddexaad. Shaashadda aan ku calaamadinnay inaan illownay lambarka sirta ah, waxaan haysannaa ikhtiyaar la yiraahdo "Ma haysto mid ka mid ah baaritaannadan." Adoo gujinaya, waxay noo geyn doontaa shaashad halka ay ka soo kabashada koontadu ka bilaabato. Waa inaan buuxinaa xog gaar ah, si aan ugu dambeyntii dib ugu helno marinkeeda.
Waa hawl yar oo dhib badan, laakiin si fiican ayey u shaqeysaa muhiimaduna waa taas waxaan mar labaad marin u heli doonnaa Hotmaisidan oo kale Marka waa inaad kaliya buuxisaa meelaha ay codsadeen.
Ikhtiyaarka ugu dambeeya waxaan marwalba awoodnaa Abuur emailka Hotmail.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Software » Sida loo soo celiyo furaha Hotmail ee la jabsaday
Waxaan rabaa inaan soo ceshto emailkeyga iyo eraygeyga sirta
Gacaliye Sonia, waxaad kaga faalootay fariintaada maqaalka kale, in tani ay matali karto xoogaa dulqaad ah. Microsoft nasiib daro waqti ayey ku qaadataa inay xaqiijiso macluumaadka laguu soo diray ee habka la soo jeediyay. Waa fikrad fiican inaad ku adkeysato shuruuda noocaas ah dhowr jeer si codsiga loo tixgeliyo. Waad ku mahadsan tahay booqashadaada waxaanan kuu rajaynaynaa inaad xal wax ku ool ah u hesho dhibaatadaada.
Waa salaaman tahay waxaan u baahanahay inaan dib u dhigo xisaabteyda !!! Waxaan hayaa shaqadayda oo dhan iyada oo ku xidhan iyada. Bogga Microsoft iima jawaabo. Boostada anigaa iska leh !!! Waxaan hayaa kumanaan baaritaan. Ila soo xiriir aniga lawyerchilotegui@gmail.com ama taleefanka Argentina 011-57447038 (taleefanka gacanta) fadlan !!!!!!!
Waad salaaman tihiin, hebel ayaa shirkad leh oo kii koontada gacanta ku haysay ayaa xaday, iyadoo ay la socoto macmiil dhan, maxaa la samayn karaa?
Ma xasuusan karo furaha sirta ah. Maxaa samayn karaa?
Waxaan kugula talinayaa inaad isticmaasho buskudka. Waxay kuxirantahay biraawsarka aad u isticmaasho inaad ku qorto emaylkaaga boosteejada, waa meesha ay ku yaalliin cookies-kan. Waad ku mahadsan tahay booqashadaada.
Adeegga Hackers-ka ugu Fiican
HADDII AAD RABTID IN AAD QAADATO ADEEG ADAG OO XANUUN LEH, NAGALA SOO XIRIIR.
- Erayga sirta ah
- Furaha Shabakadaha Bulshada
- Password-ka Bogagga Shabakadda
- Waxaan wax ka badalnaa buundooyinka jaamacadaha
- Waxaan baaraynaa kiisaska khiyaanada
- Waxaan tirtirnaa taariikhda bangiga
- Goobta Dadka
- Goobta IP'S
WIXII SU'AALO AH AMA SU'AALO AH WAAN IDINKA QAYBSANAYNAA
HALKAN. MID KA MID AH IN AY GANACSATADA UGU FIICAN YAHAY: FrogRATKA WAQTIGA AH OO AY SAMEEYEY MID KA MID AH BARNAAMIJAYAASHA UGU FIICAN MALWARE (Margera)
Waxaad ka daawan kartaa FAAHFAAHINTA TANYAANKAAN CAJIIBTA AH:
WAA WEBKA KELIYA EE AAD IIBSAN KARTO. TALO-BARI.
Ku jawaab z3u5
u soo dir macluumaad si aan kula soo xiriiro
Waxaan u baahanahay inaan helo lambarka sirta ah ee akoonka facebook, ma i caawin kartaa? maxaan sameeyaa, waa deg deg, mahadsanid
Jawaab Julián Medina
Z3U5. U soo dir macluumaad si aan kula soo xiriiro. Waxaan u baahanahay inaan kireysto adeeg.
Ku jawaab Pavlov
fiican waxaan u baahanahay inaan soo cesho erayga sirta ah ee e-maylkeyga, ma i caawin kartaa?
Ku jawaab heinnert de diaz
Waxaan lumiyay lambarkayga sirta ah ma geli karo koontadayda emailkaygu waa missybeli @ hotmail. Com
Jawaab ivelisse Tejada Rodríguez
Waxaan si deg deg ah u jabsaday akoonkeyga hotmail, wey badaleen dhamaan macluumaadka, hada maadaama aysan suuragal aheyn in lagu soo cesho aqoonsigeyga dhabta ah, horeyba waan isku dayay waxna ima caawin karo
Sideen ku soo ceshan karaa erayga fure ee hotmail?
Miraha Miva dijo
Waxaa iga lumay erayga furaha ee hotmail-ka waxaanan ubaahanahay inaan soo kabsado maxaa yeelay waa shaqadeyda
Ku jawaab Miva Midhaha
Waqti ka hor wiil aan adeer u ahay ma adeegsan cinwaankan hotmail (junior0613@hotmail.com). Mar dambe ma ogaanaysid ereyga sirta ah ama wax kale. Dhibaatadu waxay tahay in iPhone-ka aan u dirno dayactirka uu yahay iCloud ku xiran cinwaankan. Ayaa iga caawin kara inaan soo cesho furaha sirta ah ... aad ayaad ugu mahadsantahay kahor.
qoyan anna dijo
Ma xasuusto eraygeyga sirta ah ee Hotmail, miyaad iga caawin kartaa sidii aan u soo ceshan lahaa?
Ku jawaab anna pantano
Waa hagaag, way i jabsadeen oo way beddeleen dhammaan macluumaadka (emayl kale iyo lambarka taleefanka ee lala xiriiri karo), waxayna hawlgeliyeen xaqiijinta laba-tallaabo ah si ay dusha uga saaraan ... sidoo kale waxba igama harin ...
Iftiinka Badda dijo
Waad salaaman tahay, ma xasuusto eraygeyga sirta ah ee Facebook, waxaan u furaa si koodh ah, laakiin si aan u dhaqaaqo waxay i weydiistaan ​​lambarka sirta ah, sidoo kale ma xasuusto midka loo diro emaylka Hotmail ee la filayo inuu isku mid yahay, iyo nambarka taleefanka ee aanan dhigin mar dambe ma haysto, waxaan u baahanahay inaan ogaado waxa la sameeyo, mahadsanid !!
Ku jawaab Luz marina
Galab wanaagsan waxaan isku dayayaa inaan soo ceshto akoonkeygii aan ka furtay laptop-ka isla markaana aan furay taleefanka gacanta hadana ma garan karo furaha. Waxaan siiyay xiriir emayl laakiin ma awoodo inaan furo emaylkayga. Sidoo kale waxaan siiyay email gmail ah. com oo dhaha waxay dirayaan koodh laakiin ma imanayo. fadlan haddii qof i caawin karo aad baan kuugu mahadcelinayaa
Jawaab Daniela Ogaz
Waad salaaman tihiin, ma xasuusto eraygeyga sirta ah iyo lambarka aan galiyay, mar dambe ma haysto, qof ayaa garanaya sida loo sameeyo xq koodhka aad ugu tagto emaylka beddelka ahi waxba ka tari maayo
Ku jawaab Gimena
Gal waqti hore oo waligaa ha isticmaalin Hotmail. Lamaane keliya. Iga dhig facebook ma xasuusto lambarka taleefanka ama emaylka beddelka ah ee qof i caawiyo fadlan
Waxaan ahay sonia ramirez mana xasuusto eraygeyga sirta ah ee Hotmail waxaana rabaa inaan soo ceshado waxaan haystaa afarta aan ka sheegnay taleefoonkii hore, hada waxaan heystaa lambar cusub fadlan i caawi
hi waan quusanayaa maxaa yeelay waxay xireen koontadayda HOTMAIL ee aan haysto sannado. Waxay i weydiiyaan xog aanan xitaa xasuusan oo waxaan dhigay wixii aan moodayay inaan dhigay waqtigaas. Laakiin midkoodna iskudayadaas kuma qancin waxayna xireen koontadayda. Ma aqaano waxaan sameeyo, waan quusanahay maxaa yeelay waxaan u isticmaalaa koontada sababo xirfadeed iyo shaqsiyadeed qof walbana wuxuu leeyahay emaylkaas. Ma aqaano waxaan sameeyo, waxaan eegay hareeraha internetka maalmo, waxaan isku dayayay inaan fariimo u diro Microsolft laakiin ikhtiyaarkan waa alibi maxaa yeelay waxay dhaheen bogga ayaa si kumeel gaar ah u shaqeynaya Waxay ku xayireen si iskood ah oo aan lagala tashan, hadana way baajiyeen mana garanayo waxaan sameeyo. Fadlan, qof ma i caawin karaa? Mahadsanid !!!
Ku jawaab Marcela Mezzina
Fiid wanaagsan, waxaan halkaan u imid inaan ku weydiisto caawimaaddaada, ma geli karo emaylkeyga hotmail, nambarka taleefanka gacanta ee aan galiyo ma haysto hadda waxbana kama xasuusto su'aalaha ay i weydiiyaan inaan ka soo kabto xisaabteyda. sida labadii lambar ee ugu dambeeyay ee aan adeegsaday, xaaladdan mid uun baan xusuustaa, ma xasuusto su'aasha amniga, farriimihii ugu dambeeyay ee la diray. Fadlan waan ku qanacsanahay kaalmadaada maadaama aan si deg deg ah ugu baahanahay inaan galo emaylkeyga.
Ku jawaab Carlos Salazar
Fiid wanaagsan, Waxaan iskudayey inaan galo akoon cusub oo hotmail ah muddo bil ah waxayna ii sheegtaa in erayga sirta ahi khaldan yahay maxaa yeelay waxaan ka jawaabayaa su'aalaha ii yimaada wuuna sii soconayaa isagoon iga tagin, ma fahmin ayaa igu dhacday aniga oo aad ayaan ugu deg degsanahay in laga qaado maadaama ay tahay emailkeyga shaqada, fadlan ma i caawin kartaa ???
Saamaynta 'Scuf', xakamaynta xakamaynta ee dhammaan ciyaartooyadu rabaan
Sida loo ogaado cidda igu soo waceysa lambar aan la garaneyn